> Resource> iTunes> Olee otú iji weghachi Ndi ana-akpo Naanị site na iTunes ndabere
Enwere m ike weghachi kọntaktị naanị site iTunes ndabere?
Dị ka anyị nile mara na iTunes na-akpaghị aka na-eme ka a ndabere maka gị iDevice mgbe synced na ya, ma iTunes adịghị ekwe ka ị hụchalụ na selectively na-data site na ya. Ị pụrụ nanị weghachi dum ndabere. Ndị mmadụ na-akpọ ya "All ma ọ bụ ihe ọ bụla". Gịnị ma ọ bụrụ na m chọrọ naanị kọntaktsị na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ? Ọ ga-ekwe omume? N'ezie, ọ bụ. E nwere dị otú ahụ n'ụzọ na ị pụrụ iji selectively ịhụchalụ na-agbake data si iTunes ndabere faịlụ.
Ihe niile ị chọrọ bụ ihe iTunes ndabere extractor dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac). Ọ pụrụ inyere gị wepụ niile ọdịnaya iTunes ndabere, nke mere na ị nwere ike ịlele ha otu otu na-enweta ihe ị chọrọ. Ọ na-ada oké, adịghị ya? Usoro ihe omume na-enye anyị a ikpe version. Gịnị mere ghara iburu ya nwere a na-agbalị ugbu a? Download na wụnye ya na kọmputa gị site na iji njikọ n'okpuru.
Mgbe ị na-ahụ na ị na-na na-efu kọntaktsị na gị iPhone, cheta ghara mmekọrịta gị iPhone na iTunes ọzọ, na-egbochi iTunes ndabere faịlụ site na-emelite. Ahụ ga-esi a kwesịrị ekwesị omume na ịrụ data mgbake ozugbo o kwere omume. Ọzọ, ka na-agbalị ya na Mac version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS ọnụ. Windows ọrụ nwekwara ike na-eso ya na-yiri nzọụkwụ na gị Windows kọmputa.
Ị adịghị mkpa ịmata ebe iTunes nsị nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na kọmputa gị. Wondershare Dr.Fone Maka iOS nwere ike na-akpaghị aka chọta ha mgbe ị ẹkedori ya. Ihe niile ị chọrọ ime na-ahọpụta ndị mgbake mode nke naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke usoro ihe omume si window. Mgbe ahọrọ ndabere faịlụ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, na pịa Malite iṅomi wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake kọntaktị site na iTunes ndabere
Ozugbo Doppler akwụsị, ị ga-ahụ na ihe niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na-amịpụtara na-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ma ego ha otu otu. Maka kọntaktị, ihe i nwere ike ịgụ aha, nọmba ekwentị, ụlọ ọrụ, ọrụ aha, adreesị ozi-e, wdg Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ na ndepụta ahụ, ị nwere ike nne Mmetụta na-agbake ha site na ịpị Naghachi bọtịnụ. Ndi ana-akpo ga-azọpụta dị ka CSV, VCF na HTML format faịlụ maka dị iche iche ojiji n'ọdịnihu.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị gaghị enwe ihe iTunes nkwado ndabere na mpaghara chọrọ iji naghachi ehichapụ kọntaktsị na gị iPhone, e nwere ka a ụzọ. Ị nwere ike gụọ ndu ebe a: Naghachi iPhone Ndi ana-akpo enweghị iTunes ndabere.
Naghachi SMS si iPhone: Nke a ndu-egosi gị otú iji weghachite ehichapụ ozi ederede site na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi oku History na iPhone: Ị nwere ike naghachi iPhone ndepụta oku kpọmkwem site iPhone ma ọ bụ iTunes ndabere, gụnyere abata, na oku na oku azaghị. Naghachi Notes si iPhon: Isiokwu a na-egosi gị ụzọ iji weghachite furu efu ndetu na ihe iPhone na nzọụkwụ. Naghachi iPhone oziolu: Isiokwu a na-agwa gị ihe mere oziolu nwere ike Ewepụtara na otú weghachite oziolu on iPhone na ụzọ abụọ. Naghachi Videos on iPhone: Isiokwu a na-egosi gị otú ị naghachi furu efu vidiyo na iPhone na ụzọ abụọ.